Kuongorora kwakadzama kweTurinabol yekuvaka muviri - Buyaas
Kuongorora kwakadzama kweTurinabol yekuvaka muviri
1. Chii chinonzi Turinabol? Chinoshanda sei?
Turinabol (2446-23-3) is steroid anabolic iyo yakagadzirwa kuburikidza nekushandurwa kwe Dianabol. Steroid inobudiswa nekubatanidza makemikari maviri eClostebol (4-chloretesterone) uye Dianabol. Ndicho chikonzero chakashandura Turinabol chemakemikari zita 4-chlorodehydromethyltestosterone. Aya maikemikari ekugadziriswa akashandisa mishonga yemiti inoita kuti ionekwe pakati pevamwe steroid sekusati isinganzwisisiki uye ine zvishoma nezvishoma uyerogenic rating. Ichi chemishonga ine nhoroondo inonakidza shure kwayo iyo inotsanangura kukwira kwayo uye kuparara pamusika.
ITurinabol yakauya mumusika kwekutanga kokutanga mu 1962 mushure mokunge Jenapharm akabudisa kubva kuEast Germany. Mumakumi mashomanana emakore, mushonga uyu wakagamuchira hutano hwekuchengetedza kwete kwete chete varume asi nevakadziwo uye vana munyika yezvokurapa. Turinabol yakaratidza kuti inoshanda pakuvaka masimba ane hutete uye kuchengetedza mafupa akawanda pasina kupa chero migumisiro yakakomba kuvashandisi vayo. Pamusana pemigumisiro inoburitswa nemutachiona uyu, vanhu vazhinji vanowanzoita kuti vatambi uye varimi vemuviri vave vachifunga nezveTurinabol se steroid yavo inofarira.
Zvisinei, mu 1990s chirwere chacho chaiva panzvimbo yepasi pose mushure mokunge East East Doping Machine yakabudirira kushandisa madhiragi kune vanotambira maOlympic. Mushure mokunge yawanikwa kuti Oral Turinabol yakaita basa rinokosha muEast German kushorwa, Jenapharm akarega mishonga yekugadzira mu 1994. Makore maviri gare gare, Pharmaceutical powerhouse yakatora Jenapharm asi kambani yakasarudza kusagadzira Turinabol zvakare, uye ndiyo iyo yakanyangarika pamusika. Kusvikira ikozvino, hapana anozivikanwa yemishonga inogadzira iri kubudisa Oral Turinabol, uye iwe unogona kungoitora kubva kuma laboratories epasi pasi kana pamusika.
Kungofanana nedzimwe vana vanabolic steroids, Turinabol (2446-23-3) ine simba rakanaka pane kuchengetwa kwe nitrogen neprotini synthesis pamwe nekusimudzira kugadzirwa kwemasero matsvuku eropa mumuviri wako. Zvose izvi, nzvimbo dzinokosha mukuvandudza yako anabolic atmosphere. Kazhinji, purotini yepineti ndiyo inonyanya kukosha mumusasa wemasumbu pamwe chete nehutano hwekushandiswa kwehuwandu hwemasero ako masero anovaka mapuroteni nemaitiro ekusimudza nitrogen achiita basa rinokosha mumapundu ako akaonda.
Kune rumwe rutivi, masero matsvuku eropa ayo ane basa rekupa miviri yako miviri ne oxygen kuburikidza neropa rako. Kunyanya masero matsvuku eropa mumutumbi wako muviri iyo steadier ndiyo inopa oxygen nemuviri kune zvikamu zvakasiyana zvemuviri unoita kuti musikana kutsungirira. Zvinhu izvi zvose zvemuviri zvakakosha mumuviri wako sezvazvinovandudza mishonga kupora pamwe nekuwedzera kukura kwemashuga. Ichi ndicho chikonzero nei vatambi vakawanda vachiri kusarudza Oral Turinabol pane dzimwe vanabolic steroids.
Uyezve, Turinabol inozivikanwawo nekuderedza Sex Hormone Binding Globulin (SHBG) iyo inobvumira kuti testosterone iite zvakasununguka mumuviri kuwedzera migumisiro yayo. Kunze kwekuti, mishonga inochengeta dzimwe steroid iyo iwe unogona kunge uchishanda mumuviri uye unovadzivisa kubva pakusunga neSBBG. Kazhinji, kana iwe ukatora Turinabol nedzimwe vana anabolic steroid, unogona kuva nechokwadi kuti uwane mikana yakawanda sezvo inoderedza SHBG - nokudaro ichikupa mhinduro dzaunoshuva pakuguma kwekufamba.
Kuti uwane mamwe mashoko pamusoro pemusiyano pakati pe Dianabol neTurinabol, tapota reference article: Icho Chinyorwa Chekupedzisira kuna Dianabol yekugadzirisa muviri
Oral Turinabol (2446-23-3) ine simba revanabolic iyo yakarongwa pa 53 uye zvakanyanya zvikuru uyerogenic effect yakarongwa pa 6, izvi zvinoita kuti mushonga wacho mukuru paunenge uchienzanisa kuwanikwa uye nemigumisiro inopa kuvashandi vayo. Nokudaro, paunotora ichi chirwere iwe hauzowanzova nechisimba, hutsinye kana kuti kutsamwa, asi izvozvo hazvirevi kuti migumisiro haisipo zvachose. Vamwe vanhu vachazviona zvichienderana nekuti miviri yavo inobata sei neanabolic steroid. Mukuenzanisa nemubereki Dianabol, Turinabol inonzi steroid ine simba shoma, uye vatambi kana kuti bodybuilders havawanzozviona sehuwandu hunowedzera kuwedzerwa kunze kwekushandiswa pamwe nedzimwe simba anebolic steroid.
Oral Turinabol inenge hafu yeTesttosterone nebobolic rating uye mahesero ayo anobva ku40 kusvika ku60mg pazuva; zvisinei, chiremba wako anogona kukupa mazano kana iwe mushure mekuongorora hutano hwako. Nokuda kwevashandi vekuTurinabol vakaoma, madhesi anogona kuva akakwirira sa 80 kana 100mgs pazuva. Vamwe vanogadzira muviri vanotaura kuti mishonga yemishonga inogona kubuda apo iwe unotora dhigirii, asi chinhu chakanaka ndechokuti mararamiro anoramba aripo.
Munyika yezvokurapa, the Turinabol dosages inowanzoperera, uye murwere murume anorayirwa kuti atore kuzere 5 kusvika 10mg pazuva kuti awane masimba kana mapfupa akaora. Kune rumwe rutivi, varwere vechikadzi vanotora chirwere chakaderera cheTurinabol che 1mg chete pazuva uye kana kuwedzerwa hakufaniri kuenda kupfuura 2.5mg pazuva. Mishonga inoita kuti murume ave nechimiro mumuviri, uye naizvozvo, vashandi vechikadzi vanogara vachikurudzirwa kutora madhoji maduku kuti vadzivise virilization.
Vatangi veTurinabol vanofanirawo kufunga nezvekuenda kune madhesi mashoma anokwanisa kugadziriswa mushure mekunge muviri uchishandiswa kuwedzera. Kana iwe uri mutsva mu-steroids, haufaniri kutora kupfuura 40gm ye steroid iyi zuva. Enda kuenda kuongororo yezvechiremba uye chiremba wako achakupa mazano maererano nekugadzirisa uye kuisa mukana weTurinabol iwe. Usangotenga chirwere ichi uye utange kushandisa pakarepo usingatori kurapwa kwechiremba. Izvi zvinogona kutungamirira kumigumisiro yakakomba iyo inogona kuva inodhura kana yakaoma kuchinja.
Oral Turinabol inowanzobatwa nemamwe anbolic anabolic steroid pamusana pekukwanisa kwayo kubvisa SHBG nekuivhara kubva pakusungwa pamwe nesteroids. Nokudaro, kugovera testosterone mumutumbi ine nzvimbo inogonesa kushanda zvakajeka uye inopa mitsara yakawanda kumushandisi. Sezvambotaurwa, Tbol haifaniri kuonekwa kuti ndiyo inonyanya anabolic androgenic kana anabolic, uye ndicho chikonzero nei vashandisi vakawanda vanosarudza kuishandisa pamwe nekuwanda kuwana zvigadziridzo. Oral Turinabol inoita kuti vana analiclic steroid yakanaka ive yakashandiswa panguva yekurasikirwa kwemafuta, zvikamu zvekucheka uye kusati kwasvika pakugadzirisa muviri.
The Oral Turinabol maitiro zvinogona kusanganisira mishonga chete nemayero kubva ku 40-60mgs zuva rimwe nerimwe nokuda kwe6 kusvika kwevhiki dze8. Iyi miyero uye hutano huchakwanisa kukupa nemisungo yakaonda, kusimbisa simba rako rose remuviri pamwe nekuchengetedza musimba wako. Muchikwata chepamusoro cheTbol stacking iwe unogona kushandisa zvimwe zvidimbu zvakadai seTesttosterone kuti iwirirane nemigumisiro. Chiremba wako anogona kukukurudzira kuti ujove testosterone propionate dheta ye100mg inotora muromo Turinabol kwemavhiki mashoma e8, ndiko kuti iwe unoda kuwana hutano hwakanaka uye huyeuka kuti uende pamwe neyero nekushanda nekudya kwakakodzera.
Murefu yakawanda testosterone miitiro yakadai sekushandisa testosterone Enanthate inofamba kwevhiki dze12, unofanira kutaurira Oral Turinabol chete yekutanga 4 kusvika kuvhiki dze6. Kana pane chero chinhu chipi nechipi chiudza chiremba wako munguva shoma shoma kuderedza kuyerwa kana kugovera imwe sarudzo zvisati zvaitika.
4. Turinabol migumisiro
Kungofanana nedzimwe steroids, Oral Turinabol (2446-23-3) inopa musanganiswa wemigumisiro zvichienderana nekushandisa kwaunoita uye zvaunoda kuzadzikisa. Vamwe vanhu vakave neruzivo rwakaipisisa ne steroid iyi apo vamwe vanofarira Turinabol pane imwe steroid yemuromo. Kwemakore iyi anabolic steroid yakave yakashandiswa zvikuru kana yakazvimiririra kana yakagadziriswa neine yakawanda injectable steroids nevatambi uye bodybuilders. Kusvika pakusangana nemishonga, ichi chirwere chinoramba chiri chimwe chezvinyorwa zvakashandiswa mumuromo steroid mumakumbo maviri uye kucheka. Heano mamwe emigumisiro yakanaka iyo unogona kutarisira kubva kune inodiwa steroid yemuromo;
a) Wedzera simba remuviri
Kuwanda kwevashandisi veOral Turinabol zvakanyanya kuitira kuti varimi vemuviri, mabhasikoro, uye vatambi vauye vachiona simba rakawedzerwa rinoita kuti vakwanise kushanda kwemaawa akawanda pamwe nekukwikwidza zvakanaka. Chikonzero nei vatambi vakawanda vakakundikana kuita zvinangwa zvavo zvekuita kusava nesimba rakakwana kuti vatore kuburikidza nekudzidzira uye mumakwikwiwo. Zvisinei, kana ukashandisa Turinabol zvakanaka, iwe unogona kuva nechokwadi chekuwana simba rakawanda nekuzadzisa zvinangwa zvako.
Zvisinei, usapfurikidza netariro yekuwana simba rakawanda; iyo miyo inorayirwa nachiremba wako yakakwana kuti ipe migumisiro yaunoda. Kuwedzerwa kwehuwandu hwezvekuwedzera kunongowedzera mikana yekutarisana nemigumisiro yakakomba. Iwe unogonawo kuisa steroid ino muromo nezvimwe zvakanyanya zvinokonzerwa nemigumisiro yakanaka.
b) Wedzera Musisi Misa
Kana iwe uri muchengeti wemuviri uchitsvaga mutsara unobatsira kuvaka misumbu yako, saka iwe unogona kuenda kuOral Turinabol. Kutora dhiyo yakakodzera uye kuvhara, mushonga unopa hutano hwakanaka hwemapfupa pakuguma kwekufamba kwako. Iyo mishonga inowedzera masero matsvuku eropa mumuviri wako unoshandura kuhuwandu hunopa michina uye oksijeni kumitumbi yako yomuviri, izvo zvinoita kuti musumbu hukura. Kune rumwe rutivi, mushonga unobatsirawo kukurumidza mishonga kugadzirisa zvakanyanya mushure mekushanda zvakaoma. Yeukawo kuti uende nechiyero chekudya kwakakodzera uye unosanganisira chiremba wako mune zvose zvakarongwa.
Gadzirisa chiremba wako nezvekuti uri kufambira mberi sei shure kwekutanga. Rega chiremba wako akubatsirewo kusarudza zvakakodzera stacking supplement zvichienderana nemigumisiro yaunoda kuzadzikisa. Vadzidzisi vako vekudya uye mudzidzisi vanofanirawo kuziva kuti uri kushandisa steroid kuti uve nemigumisiro yakanaka. Iwe unogona kutarisira kuwana kune 10lbs pakuguma kwekufamba kwako. Kureba kweTurinabol nekuyera uye kuyerwa kuchaitawo basa rinokosha pakusarudza huwandu hwemisumbu inonda kuti iwane pakati pezvimwe zvinogadziriswa nemushonga uyu.
Turinabol ndeimwe yezvakanakisa kugadzirisa mavara uye vatambi vakawanda uye bodybuilders vanosarudza iyo pavanenge vachida kubvisa mafuta akawanda emuviri. Mushonga uyu uchakuchengetedzawo kubva pakurasikirwa kwemaviri, uye iwe uchanzwawo kuoma kwemasuru. Zvose zvaunoda pano ndezvokuti ucheke mafuta akawanda emuviri ari kukuramba iwe mishonga yakaonda uye iyo inotarisa iwe unofanirwa kuve nayo semuumbi wemiti. Zvisinei, hapana chiyero chekutarisa kuti huturu hwakaoma huchava hupi mushure mekushandisa steroid. Asi zvakadaro, Turinabol ichiri ndiyo yakanakisisa sarudzo kune vakawanda vomuviri uye vatambi. Iwe unogonawo kushandisa Turinabol kunyange iwe hausi mutambi kuti ucheke mafuta akawanda emuviri kana kutarisa uremu hwako.
Kuti vakadzi vave nechokwadi chokuti iwe unotora madhoji maduku kuti iwe uwane zvikwereti zvakanyanya uye usadzivirire zvakaoma mitambo yeTurinabol. Gara kune maitiro mashoma akataurwa nachiremba wako. Zvisinei, vamwe vakadzi vangave vachida madhigirii mashoma kuti vawane mhinduro dzinodiwa asi regai chiremba aite kuchinja uye kuenzaniswa kwehutano.
d) Inowedzera Nitrogen Retention
Izvi zvinodhakawo chimwe chezvishoma zve steroid nekwanisi yekuvandudza nitrogen kuchengetedza mumatumbo ako. Nitrojeni inokosha mukusimudzira musimba kudzivirirwa nekukura. Nokudaro, paunenge uchishandisa ichi chirwere, unogona kuva nechokwadi chekuwana miviri yakanaka. Munguva yekucheka, nitrogen inoita kuti iwe usarasikirwa nemisungo yakaonda pamwe nemafuta emuviri. Sezvo mutambi, zvose zvaunoda mhando dzemhando uye zvishoma mafuta, uye ndizvo zvinoita kuti Turinabol iwedzerwe zvikuru mumitambo yenyika. Zvimwe zvinoshandiswa hazvibvumiri kutora nitrogen mumisungo uye zvinokurudzirwa kuti iwe uende nechetero steroid nemuromo weTurababol doses.
Kuwedzerwa kwehuwandu Turinabol zvechokwadi ichaguma nemigumisiro yakaoma. Dzimwe nguva, kunyange paunotora doro rezasi, iwe unogona kuve nemigumisiro kubva kune miviri yevanhu yakaoma. Ndosaka kurapwa kwechiremba kunokosha nguva dzose usati watanga kushandisa anabolic steroid. Vatambi vakawanda kana muviri vanogadzirisa kazhinji vanotorwa nevezera ravo uye vanotenga mishonga nokuti avo vanoshanda navo vari kuvashandisa. Zvinodhaka zvinoparadzaniswa nevanhu vakasiyana-siyana; Turinabol inogona kukushandira iwe asi inokundikana kufarira shamwari yako pasinei nekushandisa dhimwechete. Heano mamwe emitambo yakawanda yeTurinabol;
Muromo weTurinabol hauna chero isrogenic migumisiro sezvo haibvumiri, hapana zvinogadzira progestin zvakadai segynecomastia uye iwe unofanirwawo kukanganwa nezvekuwedzera kwekuchengetedza mvura paunenge uchishandisa ichi chirwere. Izvozvo zvinoita kuti Turinabol ive steroid yakaisvonaka kune avo vanoda kuvhara kuwedzerwa kweropa kunokonzerwa nekushandiswa kwe steroid.
Mukugadzirisa, Oral Turinabol hairatidze zviratidzo zvekuve neine androgenic zvinogona kuendeswa mumuviri wako. Zvisinei, sezvo mushonga wacho usina kugadzirwa nekambani yemishonga inoshandiswa uye inongowanikwa chete pasi pevhu, zvinogona kuva zvakaoma kuratidza kana zvingakuzarura iwe uyerogenic nemigumisiro kana kwete. Vamwe vashandisi vanogunun'una pamusoro pevana vaduku uyerogenic migumisiro yakadai sevhudzi rinorasikirwa, acne, uye kurara kwemurume. Mitumbi yevanhu yakasiyana, uye kana iwe ukaona chero yezvimwe zviitiko zvisingaoneki tsvaga chiremba wako pakarepo.
Madzimai, matambudziko eTurinabol anoonekwa zvikuru kupfuura varume vakadai semrirization iyo inosanganisira; kuwedzera kwezwi, kuwedzera kwechigamba, nekukura kwebvudzi pamuviri wose. Iyo migumisiro yemigumisiro inogonawo kudzorwa kana iwe ukamisa hutano hwako zvisati zvaitika. Kana iwe usingaremekedzi migumisiro yacho, vangave vakaoma kuti vadzoke kukumanikidza kuti ugare hupenyu hwako hwose nemafungiro evanhu izvo hapana mukadzi anogona kutotanga kurota.
Oral Turinabol ine zvakakosha pakuwedzera kweLDL iyo inonzi inonzi cholesterol yakaipa uye kuderedza HLD iyo yakanaka cholesterol. Aya mazinga akadai eholesterol akaipa ane ngozi uye anogona kutungamirira kumaronda emwoyo. Nokudaro, kana uine huwandu hwakawanda hwehushutera, unofungidzire kuramba uri kure nesteroid. Zvimwe, kana uchishandisa kuti uve nechokwadi chekuti iwe uite basa rakawanda uye ugozodya zvokudya zvakapfuma mu omega fatty acids. Kutora hove zhinji dzehove huchavawo pfungwa yakanaka.
Iyi steroid inoshungurudza maitiro ako chaiwo ekutenderera testosterone kunze kwekunge iwe uchiitora pamwe chete neextosterous testosterone. Zvisinei, mushure mekuzadzisa dhigiriji yako, muviri wako ucharamba uchinyora testosterone hormone kunyange zvazvo uine huwandu hushoma kana iwe usingasanganisi testosterone yakawanda mumutero wako. Maestresterone emaodzanyemba anogona kutungamirira kune zviratidzo zvakadai sezvinetso zvepanyama, zvepabonde uye dzimwe nguva mupfungwa. Saka, zvinokurudzirwa kuenda kune Post Cycle Therapy (PCT) mushure mekuzadzisa mutambo weOrmal Turinabol.
Kungofanana nehuwandu hwemuromo steroid, Turinabol inogona kuva chepfu kune chiropa chako, uye iwe unofanirwa kuva nechokwadi kuti iwe unopfurikidza nekukwirira kwayo nemishonga yekutsigira michina. Taura nachiremba wako uye iye / iye achapa zvakanakisisa kubhadhara kuti uende pamwe neseroji yepamusoro. Zvisinei, iwe unogonawo kudzivisa dambudziko iri nekutora mishonga mumadhora mashoma uye kuenda kuchipatara chekuongorora nguva uye shure kwekupedzisa mhirizhonga
5. Turinabol hafu yeupenyu
Oral Turinabol inoramba iine imwe yakanyanya steroid yemuromo ine hafu yehupenyu hurefu. Iyo mishonga inobata hafu yehupenyu hwemaawa e16 mumuviri wako uye naizvozvo, iwe unongoda kutora dhiyo kamwe chete pazuva. Hapana chikonzero chekuparadzanisa dhigirii muviri kana katatu, uye vanachiremba vazhinji vanokukurudzira kuti uitore kamwe chete pazuva. Kuwanda kwevashandi ava steroid vanosarudza kutora maTurinabol madhairi sehuwandu hwekushanda kwepamberi yekuvapa simba ravanoda kuti vadzidzise zvakakodzera zvakanyanya kuitira kuti varimi vemuviri. Vamwe vashandisi sekutungamirira chirwere chemishonga pamwe chete nekudya kwavo kokutanga pavanomuka. Zvisinei, chiremba wako achakupa mazano pamutero wakakodzera uye nguva yakakodzera yekuutora iwe kuti uwane zvigadziro zvako zvaunoda pakuguma kwemhepo.
Kune rumwe rutivi, hapana anoita seanonyatsoziva kuti mutachiona uchareba kwenguva yakareba sei mumuviri wako kana wapedza Turinabol yako. Dzimwe tsanangudzo dzinotaura kuti mishonga inogona kupera mumuviri wako zvachose mushure memwedzi ye12 apo vamwe vatengesi vanoti nyaya yevhiki chete isati yabuda mumuviri wako. Kana zvakadaro, uri kuronga kushandisa Turinabol uye uitewo mumakwikwi ako anotevera asingabvumiri kushandiswa kwe steroids, ona kuti unobvunzurudza nachiremba wako. Kuongororwa kwezvokurapa kuchave kwakakosha mushure mekupedzisa mhirizhonga uye zvakare kutsvaga mamwe mishonga inogona kubatsira mishonga inopera mumutumbi wako mukati mechinguva chiduku zvikuru zvichibvira.
6. Turinabol yekucheka
Kucheka maitiro kunokosha kune chero vashandisi ve steroid nokuti inokubatsira kuti ubvise mafuta akawandisa emafuta anokuramba iwe mishonga yaunoda. Turinabol inogadzira kukura kukuru kwekuwedzera nokuti inowedzera nitrogen kuchengetedza mumatumbu ako kudzivirira kuti irege kurasikirwa nemafuta emuviri. Kuwedzera kwacho kuchakubatsirawo kuti uwane zvakaoma uye hutsika hutendere hutsika apo iwe unoshanda kuratidzira kurasikirwa kwehuwandu hwemafuta emuviri. Muviri wemafuta zvakakomberedza misi miviri, kuvadzivisa kubva pakuonekwa nekuoma kunyange mushure mekukura kwavo kukura. Nokudaro, kucheka maitiro anenge anenge achifanira kumunhu chero upi zvake wemuiti kana mutambi wenyanzvi.
Turinabol (2446-23-3) nekucheka kunogonawo kuiswa pamwe nedzimwe steroid injectable iyo inobatsira mukukurumidza kukanganisa kurasikirwa kwemafuta. Pano, kushanda uye kudya kwakakodzera kuchaitawo basa rinokosha munharaunda yose yekubvisa mafuta akawanda. Kucheka kunowanzo kuteverwa nekufamba-famba kunowedzera dzimwe mafuta mumutumbi wako. Taura nachiremba wako nezvenzira yakanakisisa yekupa mishonga iyi apo unoda kuderedza uremu.
7. Turinabol nokuda kwekubvongodza
Oral Turinabol haisi yakakurumbira bulking steroid, asi kana yakashandiswa zvakanaka nedzimwe steroid inowanikwa yakawanda inopa zvibereko zvakanaka. Itero steroid ichakubatsira kuwana mamwe mapaundi uye mishonga yakanaka pamagumo ekufamba kwako. Zvisinei, chii chinoita basa rinokosha mumitambo yekubvongodza ndiko kushanda uye kudya kwakakodzera. Kushandisa Turinabol nedzimwe steroid inobatsira zvakare ichava pfungwa huru kubva apo steroid iyi yemuromo inoderedza kusungirirwa kwekodzero kana SHBG inogona kuita kuti zvive zvakaoma steroid kushanda zvakasununguka mumuviri wako.
Saka, muromo Turinabol ichava nechokwadi chokuti mamwe mabhakitiriro steroid anobudirira kwehuwandu hwekuvhiringidza. Zvisinei, apo muromo weTurinabol unoshandiswa uri woga unogonawo kubatsira kuwana mamwe mishonga asi kwete kuwandu hunodiwa nevakuru vomuviri. Nenzira, vatambi vakawanda vanofunga kushandisa steroid oral nemamwe mashoma ekuwedzera kuti avabatsire kuzadzisa zvinangwa zvavo munguva shoma shoma. Pano, chiremba wako achava munhu akakurudzira kukutungamirira pakuwana zvakanakisisa kuvhara steroid iyo inogona kutakura mhinduro kana inoshandiswa pamwe nemuromo weTurinabol.
Icho chimwe chigadzirwa chaAnavar chinowanzoshandiswa kushandiswa nekucheka, kuti uwane mamwe mashoko funga reference article: Zvinhu Zvose Zvaunoda Kuti Uzive nezvaAnavar (Oxandrolone) yeMuvhuro
8. Turinabol inobatsira
Oral Turinabol inonyanya kuzivikanwa nekuda kwemigumisiro iyo inopa pamwe chete nezvinobatsira kuvashandi ve steroid. Heano mamwe emashoko anokosha mumuromo Turinabol inobatsira;
Nguva yakareba hafu yeupenyu-yakasiyana nedzimwe steroid dzemuromo, Turinabol iri pakati pemishonga mashomanana ane nguva yakareba yehupenyu hwemaawa 16. Mimwe steroid yemuromo unofanira kutora dheji se2 kana 3 dzimwe nguva pazuva asiri iyo iyo paunoshandisa Turinabol. Iwe unongoda kutora dozi yako kamwe chete pazuva, uye iwe wakanaka kuenda.
Kuvandudza masimba ekuwana uye simba remuviri -vashandisi vese veTurinabol vanotaura kuti vakakwanisa kuwana mishonga yakaonda uye kunyange mushure mekuita maitiro ekucheka masumbu anoramba asina kumira. Uyewo, vashandi vazhinji vanotaura kuwedzera kwemasimba emuviri anovabatsira kuti vashande kwemaawa akawanda uye vanowana mhinduro dzinodiwa nokukurumidza.
Hapana majekiseni-kune avo vasinganzwisisiki neine injection steroids, Turinabol inogona kuita sarudzo yakanakisisa. Iyi iri mishonga yemishonga uye kuva nehafu yehupenyu, vanhu vazhinji vanozviona zviri nyore uye vakasununguka kushandisa sezvo iwe chete uchida kutora dose imwe pazuva. Zvigumisiro zvinowanikwawo zvakare kana iwe uchifamba nemutero wako nekudya kwakakodzera nekushanda.
Inogona kuiswa pamwe neanabolic steroid yakasiyana-iyo inoshamisa vazhinji vashandisi veTurinabol kukwanisa kwayo kushanda neanabolic steroid yakasiyana-siyana zvakanyanya kuitira kuti injectable. Pakubirira nekuchera, iwe unogona kuvhara Turinabol nedzimwe mishonga inogadziriswa yemigumisiro yakanaka. Itai chiremba wenyu kuitira kuti iye awane sarudzo yakanakisisa uye kuisa maererano nezvamunoda.
Inogona kushandiswa nevarume nevakadzi-avo vanoita zvepakutanga vanogona kubatsirwa nemutauro weTurinabol. Zvisinei, vakadzi vanorayirwa kushandisa maitiro mashoma kuti vadzivise zvirwere zvinoshandiswa, asi iwe unogona kuva nechokwadi chekuwana simba remuviri uye unhu hwakakosha uye hunooma. Vatangi vekutanga vanofanira kutanga nehotera shoma dzinogona kugadziriswa mushure mekunge dzichifambira mberi kumiganhu inotevera. Kutora dhesi yakawanda kudarika kurairwa kunogona kuva nengozi yehutano hwako uye dzimwe nguva kunogona kuguma nemigumisiro yakakomba.
Kushandiswa kwehutano-chikamu kubva kuTurinabol ichikosha mumitambo yenyika, chirwere chacho chave chakanaka mune zvehutano. Varwere vakawanda vanorwara nezvirwere zvinokonzera kuti musumbu irege kusununguka, inogona kushandisa Turinabol kuvabatsira kuwana nekuchengetedza mapfupa uye utano hwakanaka. Vamwe vevatengi veTurinabol zvekare varwere vangave vasingazivi kuti ivo vashandisi ve steroid, asi inopa migumisiro yeruzhinji.
9. Turinabol kuongororwa
Oral Turinabol yave iri kugamuchira musanganiswa wekuongororwa kubva kuvashandisi, asi inoramba iine imwe yepamusoro yepamusoro inonzi oral steroids pamusika. Zvisinei, izvi zvakajairika zvakadaro munyika yezvokurapa iyo madhiragi anoita zvakasiyana nevanhu vakasiyana. Vamwe vanhu vanofarira chikamu chakanakisisa chechirwere ichi chavanoshandisa, asi vamwe vangashandisa mishonga imwechete uye vane mukana wakaipisisa. Izvo zvinoshanda kune inenge yose steroid kusanganisira muromo weTurinabol. Semuenzaniso, varimi vemuviri uye vatambi vechikwata vanga vari kupa chirongwa ichi chemishonga yakanaka pamwe chete nekuongororwa kwakaisvonaka mushure mokunge kwavabatsiridza kuzadzisa zvinangwa zvavo.
Vakatambi vanorumbidza mishonga zvakare kuitira kuti vashandise mishonga inoda uye vanovandudza simba ravo remuviri iro iro rinoguma nemigumisiro yakaisvonaka. Mukucheka maitiro, Turinabol inonzi yakakosha zvikuru saizvozvo mukudzivirirwa kwemasumbu kubva pakuchengeta nemafuta emuviri. Kune rumwe rutivi, vamwe vashanduri vanorumbidza mushonga wekubatsira kuti vawane zvizere zvizere zve sjected injectable ivo vakawana Turinabol uye sezvo inodzivirira SHBG kubva kusunga ne steroids inotorwa nemutambi.
Munyika yezvokurapa, varwere vakawanda vanofara sezvo Turinabol yakave yakabatsira zvikuru zvikuru kune avo vanotambura nemasumbu uye mapfupa ari kuparadza zvirwere. Mishonga inochengetedza mishonga yakasimba uye inovabatsira kukura, uye kuderedza migumisiro yechirwere pamuviri. Zvisinei, pane zvishoma zvishoma zvevashandi vanonyunyutika kuva nehuipi hwakaipa neTurinabol - imwe mushumo unosangana nemasikine, kurasikirwa kwevhudzi nevamwe (vakadzi) kukura kwevanhu. Mitumbi yevanhu yakasiyana, asi ruzhinji rwezviitiko izvi zveTurinabol zvinogona kudzorwa nekutora dhiyo rakakodzera nekuudza chiremba wako pakarepo iwe unotanga kuona chero ipi zvayo inorondedzerwa.
10. Turinabol inotengeswa
Dzimwe nguva unogona kuva nematambudziko apo iwe unoda kutenga Turinabol muwandu kana kuti zvakakwana kuti uwedzere kukoka kwekwenyika pasina kambani inozivikanwa yemishonga inoitengesa kubva 1996. Kunyange zvakadaro, chisarudzo choga chaunacho iye zvino ndechekutenga Turinabol online kubva kune vakasiyana-siyana vanotengesa. Ita tsvakurudzo yako zvakanaka kuti uone kuti iwe unowana mushonga kubva kune anovimbika weTurababol. Iwe unogona kutora mushonga uyu kubva kumarebhu pasi pevhu kana mumusika wemusika, asi iwe hauzove nechokwadi chehutano.
Usati waita sarudzo yako pane imwe nzvimbo yekutengesa purogiramu yekutengesa, tanga uchinzwisisa kuti mutemo wako wehurumende unoti sei nezvokutenga, kutumira kana kuva nevanabolic steroid. Somuenzaniso, muU.S. hazvibvumirwi nemutemo kutenga kana kutenga chero steroid anabolic pasina chiremba chiremba chekushandisa kurapwa. Aiwa, mutongi weTurinabol anodiwa angada kuisa vatengi vake pamigwagwa nehurumende dzavo dzekumba. Unogona Tora Turinabol Powder, kana mahwendefa ari pachikuva chedu asi tanga taudza chiremba wako, tinoshandisa nguva-kununura, uye zvigadzirwa zvedu zvakakwirira. Nokudaro, iwe uchave nechokwadi chekubudirira kweTurinabol kuwana.
11. Turinabol yekuvaka muviri - Chidimbu
Kazhinji, Turinabol yakave chinhu chakakura mukugadzira muviri uye yakabatsira vatambi vakawanda kuwana zvinangwa zvebasa ravo. Iyo mishonga yakaratidza kuti inobudirira mune zvose zviri kuvhara nekucheka. Turinabol inokurudzira musimba kukura uye simba rose remuviri pamwe nekuvandudza matanho ekugadzirisa kuburikidza nekuvandudza masero matsvuku eropa. Iwe unogonawo kuvhara Turinabol nedzimwe steroid yakasimba yezvibereko zviri nani. Turinabol hafu-hupenyu inoita kuti zvive nyore kutora madhaji ako sezvo iwe uchida kungoitora kamwe chete pazuva.
Mukucheka maitiro, Turinabol inowanikwa inooneka sezvo inokurudzira nitrogen kuchengetedza iyo inodzivirira mishonga yako kubva pakuputira uye kuparadza. Kushanda kwakanyanya kunonyanya kuzivikanwa nekugadzirisa mishonga iyo dzimwe nguva inogona kuguma nemarwadzo, asi ichi chinodhaka chinobatsira mukuvandudza maitiro ekuporesa. Kuratidzira kuenzanisi yakakodzera, inosanganisira chiremba wako, mudzidzisi uye vanodya mishonga ndiyo nzira dzakanakisisa dzekuwana turinabol yakawanda (2446-23-3) inowanikwa. Kana ukaona chero kusakanganisika kuchinja paunotora kuwanda kwako nguva dzose taura nachiremba wako munguva shoma shoma.
Roberts, A. (2016). Oral Turinabol Inotsanangurwa. A + A.
Chester, N. (2014). Anabolic agents. In Zvinodhaka mumitambo(pp. 79-99). Routledge.
Cho, SH, Park, HJ, Lee, JH, Do, JA, Heo, S., Jo, JH, & Cho, S. (2015). Kutsunga kwevanabolic-androgenic steroid vanoita zvepabonde mukunyepedzera zvinodhaka neHPLC-MS / MS. Nyaya yemishonga inoshandiswa uye inyanzvi yekuongorora, 111, 138-146.